'सरकारले मुठभेडको वातावरण नबनाओस्'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'सरकारले मुठभेडको वातावरण नबनाओस्'
काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौता पश्चात् देशको राजनीति पूरै बदलियो । माओवादीबाट छुट्टिएर नेत्रविक्रम चन्दले छुट्टै पार्टी गठन गरे ।
दुई वर्षसम्म उनको पार्टी भूमिगत भएर खुला राजनीतिमा फर्किएको छ । दुई वर्ष भूमिगत हुँदा बनाइएको सैन्य फाँटका इन्जार्ज केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइमा सरकारले अलमल गरे मुठभेडको स्थिती निम्तिन सक्ने बताएका छन् । कान्तिपुरका मातृका दाहालले चलाउनेसँग गरेको कुराकानीः
सरकार–नेकपा तीनबुँदे सहमतिमा तपाईंहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहाइ गर्ने भनिएको थियो, तर प्रक्रिया किन पूरा हुन सकेन ?
यो त सरकारको गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अभावको कारण हो ।
सरकार सहमतिबाट पन्छियो भन्ने निष्कर्ष हो तपाईंहरूको ?
अवश्य, सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको छैन ।
तपाईंहरूलाई सरकारले अझै शंका गरिरहेको देखिन्छ नि ?
त्यो पनि भन्न मिल्ला । तर, हामीले भन्दा सरकारमा सहमति पालनामा इमानको अभाव देखियो ।
तपाईंहरूले हतियार नबुझाएका कारण सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको भनिन्छ नि ?
हतियारको प्रसंग बहाना मात्र हो । हामीले अग्रगमनको कुरा गर्‍यौं । सरकार अग्रगमनका कुरा सुन्न पनि चाहँदैन ।
सुरक्षा निकायबाट द्वन्द्वकालमा लुटिएका थुप्रै हतियार फिर्ता भएनन्, ती कहाँ छन् अहिले ?
सेना समायोजन नभएको भए हतियारबारे प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो, तर समायोजन भइसकेपछि अब यो विषय उठाउनुको कुनै औचित्य छैन । अर्को कुरा हरेक युद्धमा प्रयोग भएका सबै हतियार नभेटिन सक्छन् । फेरि, यो हामीसँग सरोकारका विषय पनि होइन ।
लुटिएका हतियार तपाईंहरूसँग पनि छन् भन्ने छ नि ?
यस विषयमा प्रचण्डले खोलाले बगायो पनि भन्नुभयो । खोलाले बगायो कि, हावाले उडायो वा कसैले थन्क्याएर/थुपारेर राखे, त्यसमा हाम्रो कुरै सरोकार छैन । जसले सेना समायोजन गरे, उनीहरूसँगै सोध्नुपर्छ ।
नेकपा हतियारविहीन दल हो त ?
सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा त्यही हो ।
करिब दुई वर्ष तपाईंहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नेता–कार्यकर्ताबाट प्रहरीले करिब एक सय थान हतियार बरामद गरेको थियो, ती कहाँबाट आए त ?
ती हतियारसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन ।
सरकारले सर्त राखेर सहमति कार्यान्वयन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो भयो भने त झडपको स्थिति आउन सक्छ । संघर्षमा जानुको विकल्प हुँदैन । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । अझै पनि हाम्रो आग्रह छ कि सरकारले मुठभेडको वातावरण नबनाओस् ।
तपाईंहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिको कुरा गर्नुभएको छ, तर पार्टीभित्र सैन्य संरचना पनि बनाउनुभएको छ, यो स्वाभाविक हो र ?
परिआउँदा, आवश्यकता पर्दा भोलि युद्धकै स्थितिमा जानुपर्ने भयो भने छुट्टै कुरा भयो । तर अहिले हाम्रो कुनै सैन्य संरचना छैन ।
१० वर्षे द्वन्द्वको अवशेष : २६ सय हतियार अझै बाहिर
द्वन्द्वपीडित निरन्तर उपेक्षित
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:२६
काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संस्मरणात्मक कृति ‘बानेश्वरको सेरोफेरो’ शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक भएको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् । नेता सिंहले बानेश्वरको पुरानो अवस्था थाहा पाउन अर्यालको पुस्तक पढ्नुपर्ने बताए ।
२०१९ सालमा स्थापित श्री रत्न पुस्तकालयका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका अर्यालले बानेश्वर र आसपासका पुराना सम्झनालाई पुस्तकमा समेटेका छन् । बानेश्वरमै जन्मिएर हुर्किएका अर्यालले पुस्तकमा ६५–६६ वर्षयताको बानेश्वरको बस्ती र समाजको चित्रण गरेका छन् ।
२०१५ सालताका बानेश्वर र आसपासमा गाडी नहुँदा भरिया लगाउनुपरेको अनुभव, चामल बोक्न असन, इन्द्रचोकतिर जानुपरेका पुराना सम्झनाको रोचक वर्णन उनको पुस्तकमा पाइन्छ । पुस्तकमा बानेश्वरको सेरोफेरोसँगै त्यसबेलाको राजनीति, प्रशासन र आममनोविज्ञानबारे पनि बुझ्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:१६